2016 ~ www.Ifiyahacilmiga.blogspot.com
Daawo barashada Adobe Audition sida loo jarjaro codka So jeediye Eng C/risaaq maxamed Rashiid
6:48:00 AM Adobe-audition No comments
Daawo barashada Adobe Audition sida loo jarjaro codka So jeediye Eng C/risaaq maxamed Rashiid.
Asc aqiyarey kulanti wanaagsan kuso dhawaada Hooyga Barashada Computerka Maanta waxaan dib idiin kugu bilaabaya Couraskeeni aha Barashada Adobe Audaitionka.
Aqristoow Ha daawan Cashirkaan adoon so daawan Cashirkii 1-aad ee Adobe Audationka
Si aad u daawato Cashirkii hore Riix Halkan
Muxuu ku saabsan yahay maanta Cashirka:
Wixii Suaal igu so dir:alaqsaa1996@gmail.com
Hadii aad ka faa'iido Fadlan Asxaabtada U share gare
Maxaad Kala socota Hogaamiyaha koriyada woqooyi Kim Jogn un(Xog-Kooban)
6:14:00 AM Taarikhaha No comments
Aqiyarey kuso dhawada Hooyga Barashada Computerka Maanta waxaan Halkaan idiin kugu so Gudbinaya Taarikh Kooban oo ku saabsan kaliya taliyaha koriyada woqooyi Kim Jogn un.
Xuquuqda Video-ga waxa leh Somali Documentary.
Waxan rajeyna in aad wax badan ka ogaan doonto.
Daawo barashada Adobe Audition sida loo jarjaro co...
Maxaad Kala socota Hogaamiyaha koriyada woqooyi ...